Bụrụ onye na-akwado PixelHELPER
Bụrụ onye Patron!
M PIXEL Nyere!
Gbaa mbọ hụ na ị nwere nrụgide! Ndị na-enye onyinye na-atụnye ụtụ na iwe nke ọha. Mee oru omume nka n’agha. Onweghị ebe ọzọ ị na-enweta ọtụtụ mkpọsa maka nnwere onwe nka na ihe ndị ruuru mmadụ maka euro enyerela aka dịka anyị niile.
Kwenye onwe gị na akụkọ mmezi nke ọrụ anyị bara uru.
Biko nye onyinye via PayPal ka ịkwụ ụgwọ paypal@PixelHELPER.tv ma ọ bụ jiri akaụntụ onyinye onyinye PixelHELPER. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji kaadị akwụmụgwọ gị, jiri ụdị onyinye ahụ n'okpuru.
Download njikọ akaụntụ dịka faịlụ ederede * .txt
Ọ bụrụ na ị si Africa ma ọ bụ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa, ọ gaghị ekwe omume izipu ego na PayPal ma ọ bụ nyefee ego n'ụlọ Europe. Biko jiri nkọwa ndekọ akaụntụ nke òtù ọrụ anyị "Zombies Sans Frontieres" na Morocco.
N ° de Akaụntụ: 011450000012210002058489
BANK: BMCE Marrakech, Menara
Income tax laghachi
Gbanyere ha dị ka ihe dị mkpa site na ụtụ isi
Enwere ike ịnye onyinye maka ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ dị ka ụgwọ pụrụ iche maka òkè nke 20% nke ego gị.
Emefu a pụrụ iche na-ebelata ego ị na-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha gafere pasent nke 36 Euro.
Maka onyinye nyere 100 Euro, ị gaghị edozi akwụkwọ ọ bụla. Ọrụ nkwụnye aka dị mfe dị na 200 Euro. Ntughari mbugha nke bara uru zuru ezu.
Nwee obi ike. Nwee ike. Bịanụ mgbe obere ìgwè ndị mmadụ na-akwagharị nnukwu mgbanwe na ọha mmadụ.
Jiri nlezianya na-ebipụta & nlebara anya - kwado anyị ugbu a! Dịka onye na-enye onyinye ị na-enye onyinye dị oke ụba maka mkpali nke iwe ọha - maka ụwa ka mma.
Buru ugbua ugbu a ma mee ka ihere mebie ihe ndi ozo. Enweghị ebe ọzọ ị ga - esi nweta nnupụisi na ọgba aghara dị ukwuu maka Euro ọ bụla enyere onyinye dịka ebe a.
Ị ga-enweta akwụkwọ ozi e-mail na mkpọsa ugbu a. Ị na-ahụ na ihe ndị ruuru mmadụ na-emebi ma ọ dịghị onye na-ele anya? Anyị na-atụ anya ozi gị! Dịka onye na-akwado / onye inyeaka, ị ga-enweta ohere nke onwe na ohere naanị iji kere òkè na mkpọsa pixelHELPER. Nzukọ anyị nwere ọkwa ọrụ amara. Ya mere, onyinye ọ bụla bụ ụtụ ego.
Oliver Bienkowski na a gbara ajụjụ ọnụ Anke Engelke.
ZDF 37 ogo soro PixelHELPER na-alụso NSA ọgụ na US Embassy.
E-Mail maka na-akwado ndị òtù: Oliver Bienkowski, oliver@PixelHELPER.org
3 IHE NDỊ NA-EBE EBE EBE EBE EKPERE
Anyị dị irè! Anyị na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu ma na-eme nke ọma ma na-eme n'enweghị nnukwu ngwa nhazi.
Anyị na-ada ụda! Site n'onyinye gị ị na-eme ka mkpọsa dị irè maka ikike ụmụ mmadụ.
Anyị jidere! Ọrụ anyị chọrọ ndidi na ogologo ume. Site n'onyinye na-adịgide adịgide ị na-enyere anyị aka ịnọ na-ege ntị!
Gbanyere na anyị ...
Ihe PixelHELPER Foundation bụ onyinye ma ghọtara dị ka onye ruru eru.
Onyinye gị bụ ụtụ ụtụ isi.
Anyị nwere obi ụtọ ịnye gị onyinye azụmahịa.
N'ezie, inye onyinye mgbe niile nwere ike gbanwere ma ọ bụ kwụsị n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa.
Site n'onyinye aka gị nye akaụntụ nnabata anyị adịghị eweta ụgwọ ọ bụla maka akwụkwọ.
PixelHELPER Foundation na-achụso ọrụ ebere nanị na ozugbo na ihe akụkụ nke "Propositions Beneficial Purposes" nke Usoro Ụtụ isi pụtara. Ọ bụ dịka ọkwa nlele nke ụlọ ọrụ ụtụ isi Magdeburg nke 28. January 2016 ka a kwụpụrụ na ụlọ ọrụ na ụtụ ahịa n'ihi na ọ bụ naanị ụtụ isi-nke nwere ihe ùgwù pụrụ iche na ihe ọma dịka §§ 51 ff.
Enyemaka nri achịcha European mkpọ ahụ enyemaka na-enyere ndụ aka
Deutsche Welle na-akọ akụkọ banyere ọkụ site n'aka PixelHELPER maka Raif Badawi
Bụrụ onye na-akwado PixelHELPER Disemba 3rd, 2019Oliver Bienkowski